ट्याग: झरना विकास मोडेल | Martech Zone
ट्याग: झरना विकास मोडेल
भवन निर्माणबाट सफ्टवेयरसम्म। १ 1950's० को दशकमा जल प्रवन्ध विकास मोडेल सफ्टवेयर डिजाइन र विकासमा देखा पर्‍यो। प्रणाली निर्माण उद्योगको एउटा अवशेष हो जहाँ कामको सुरु हुनु अघि आवश्यकताको आधारमा सही उत्तर खोज्नुपर्‍यो। र, त्यो संसारमा, सही उत्तरले अर्थ दिन्छ! के तपाईं एक दृश्य कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईंले बिल्डको माध्यमबाट अर्ध तरिकाले गगनचुम्बी भवन बनाउने निर्णय गर्नुभयो? त्यो भने, को उप-उत्पादन